Khitalin Media - Page 180 of 216 - News and Media
May 5, 2020 May 5, 2020 by Khitalin Media
ရန်ကုန်ကတော့ ဆရာဝန် အမြင်အရ စိုးရိမ်ရေမှတ်နဲ့ နီးနီးလာပြီ။ လူတွေလဲ အရင်လို အများကြီး၊ ကားတွေလဲ ပြန်ပိတ်၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင် ပြန်ထိုင်ကျ၊ ဆင်‌‌ခြေဖုံးတွေမှာဆို ဘီယာဆိုင်တွေတောင် နေပူသလိုလိုနဲ့ ယင်းလိပ်လေးတွေကာပြီး ဆိုင်မှာ ပြန်သောက်လို့ရပြီ။ ဆိုက်ကားဂိတ်တွေမှာ ဈေးတွေမှာ ပြန်စည်ကားပြီ။ ရပ်ကွက်လူကြီးတွေလဲ ရေနွေးကြမ်းဝိုင်းနဲ့ အေးအေးလူလူဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးလို့။ စားဝတ်နေရေး ထွက်တာတင်မက အင်ယားကန်စောင်းမှာလဲ အလည်အပတ်ထွက်သူတွေ အရင်နီးပါးပြန်ဖြစ်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် mask ကို သေချာတတ်သူက တစ်ရာမှာ ဆယ်ယောက်၊ နောက် သုံးဆယ်က မေးစေ့မှာ၊ ခြေက်ဆယ်ကတော့ တပ်ကို မတပ်တာ။ အေးလေ ဘာတပ်စရာလိုလဲ၊ မွန်းကမွန်းပါဘိသနဲ့၊ ဒီလောက်ပူတဲ့ ရာသီဥတုမှာ။ စားဝတ်နေရေးက ရှိသေးတယ်။ ထွက်ရမှာပဲ။ ဒါက လက်လုပ်လက်စား အတွေး။ အင်းယားကန်သွား၊ အိမ်မှာလူစူ၊ ဝိုင်ဘီယာသောက်နေသူတွေကျ … Read more
မလှတဲ့ အိမျထောငျရှငျမ မရှိဘူး အသုံးမကတြဲ့ အိမျထောငျဦးစီးဆိုတာပဲ ရှိတယျ။
May 5, 2020 by Khitalin Media
မိုးတွင်းကာလဆိုတာ ဦးရေပြားပေါ်မှာ ယားယံမှုတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကာလပါ။ အုန်းဆီကို အနွေးဓာတ်ပေးပြီး ဦးရေပြားပေါ် လိမ်းခြယ်နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ဆံပင်ကို မိုးရေမစိုအောင် ဂရုစိုက်ပါ။ စိုသွားရင် ရှန်ပူနဲ့ချက်ချင်းခေါင်းလျှော်ပြီး အခြောက်ခံပါ။ မိုးတွင်းကာလမှာ ရှန်ပူအပျော့စားနဲ့ ခေါင်းလျှော်ပါ။ Conditioner ကိုလည်း သုံးပေးပါ။ မိုးတွင်းတလျှောက်လုံး ဆံပင်အရောင်ဆိုးခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဤဆောင်းပါးကို ဂန္ထဝင် မဂ္ဂဇင်းမှ ရေးသားတင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆံသားတောက်ပမှုကို ထိန်းသိမ်းဖို့ ဓာတုပစ္စည်းမပါတဲ့ သဘာဝထုတ်ကုန်တွေကို အသုံးပြုပါ။ လှပဖို့အားစိုက်ထုတ်နေရတဲ့ပုံစံထက် သဘာဝကျတဲ့ဆံပင်ပုံစံမျိုး ညှပ်ပါ။ ခေါင်းလျှော်ပြီးရင် လေမှုတ်စက်မသုံးဘဲ တဘက်နဲ့အခြောက်ခံပြီး အစိုဓာတ်ထိန်းသိမ်းပေးပါ။ သိမှတ်သင့်တဲ့ဗဟုသုတလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေဖို့ ဒီစာစောင်လေးကို SHARE လိုက်ပါဦးနော်။ credit unicode မိုးတှငျးကာလဆိုတာ ဦးရပွေားပျေါမှာ ယားယံမှုတှကေို ဖွဈပျေါစတေဲ့ကာလပါ။ အုနျးဆီကို အနှေးဓာတျပေးပွီး ဦးရပွေားပျေါ လိမျးခွယျနှိပျနယျပေးပါ။ … Read more
၁။ ကျွန်မတို့အမျိုးသမီးတွေက နိုးစက်ပေးရင် လိုတာထက်ပိုပြီး (၁၀)မိနစ်စောပေးလေ့ရှိကြတယ်။ (၁၀)မိနစ်စောပေးတာကလည်း နိုးစက်မြည်ရင် ပြန်ပိတ်ပြီး (၁၀)မိနစ်အိပ်ဖို့လေ။ ၂။ ကျွန်မတို့ မျက်တောင်ကော့တဲ့အခါ ပါးစပ်ကသူ့အလိုလိုပွင့်လာပါတယ်။ ဒီလို mood ထည့်ပြီးပါးစပ်ဟောင်းလောင်းနဲ့ မျက်တောင်ကော့နေတော့လည်း ကိုယ့်ပုံကရယ်စရာကောင်းနေပြန်ရော။ ဒါနဲ့ပွင့်နေတဲ့ပါးစပ်ကလေးကို အာရုံစိုက်ပြီးပြန်ပိတ်လိုက်တဲ့အခါ မျက်တောင်ကော့ဆေးတွေ ပွကုန်ပါလေရော။ ၃။ အမျိုးသမီးတွေကဖုန်းဆိုရင် လက်ကိုင်အိပ်ထဲပစ်ထည့်လိုက်တာပဲ။ ဖုန်းသံမြည်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှ ပျာယာတွေခပ်ပြီး လက်ကိုင်အိပ်ကြီးထဲ မွှေနှောက်ရှာဖွေပါတော့တယ်။ ၄။ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လက်ကိုင်အိတ်ထဲကိုဖွင့်ကြည့်ရင် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများစွာ ထည့်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒါတွေကိုအလေးခံပြီးထည့်ထားတာ အသုံးလိုလို့လားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချိန်ကျရင် အသုံးများဝင်မလားဆိုပြီးထည့်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၅။ အမျိုးသမီးတွေကထားတတ်သိုတတ်တဲ့နေရာမှာအလွန်ကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်။ ခက်တာကထားတဲ့နေရာကိုမေ့နေခြင်းပါပဲ။ ၆။ မျက်မှန်ကိုခေါင်းပေါ်တင်ထားပြီး မျက်မှန်ပျောက်လို့ လိုက်ရှာနေတတ်တာအမျိုးသမီးတွေပါပဲ။ ဤဆောင်းပါးကို ဂန္တဝင် မဂ္ဂဇင်းမှ ရေးသားတင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ … Read more
အမြဲတမ်း ပြုံးနေတတ်တဲ့ မြတ်နိုးကို အခုလို မြင်ရတာ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ..
ရင်ထဲမှာအပူမီးတွေတောက်လောင်နေပေမယ့် နာရေးသတင်းလာမေးသူတွေကို ဧည့်ဝတ်မပျက်ဧည့်ခံစကားပြောနေတဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦးရဲ့ ဗီဒီယို ချစ်စရာကောင်းပြီး အမြဲတမ်း ပြုံးနေတတ်တဲ့ မင်းသမီးလေး ဆုမြတ်နိုးဦးက အခုလက်ရှိမှာတော့ သူမဘဝရဲ့ အမှောင်မိုက်ဆုံးအချိန်တွေကို ရင်ဆိုင်နေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆုမြတ်နိုးဦးရဲ့ မိခင်ကြီးက ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ (၃) ရက်နေ့မှာ ရုတ်တရက် ဦးနှောက်သွေးကြောပေါက်ပြီး ဘဝတစ်ပါးသို့ ကူးပြောင်း ကွယ်လွန်သွားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နေထိုင်ကောင်းနေတဲ့ မိခင်ကြီး အခုလို ရုတ်တရက်ဖြစ်သွားရတာကြောင့် ဆုမြတ်နိုးဦးခမျာ ဖြေမဆည်နိုင်အောင် ဖြစ်နေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မိခင်ကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရလို့ အပူမီးတွေ တောက်လောက်နေပမယ့် နာရေးသတင်းလာမေးနေသူတွေကို ဧည့်ဝတ်မပျက် ဧည့်ခံနေတဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦးရဲ့ ပုံရိပ်က အရမ်းကိုသနားစရာကောင်းလှပါတယ်။ အမြဲတမ်း ပြုံးနေတတ်တဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦးတစ်ယောက် မျက်ရည်မဆည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေရတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ပရိသတ်ကြီးအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ ဆုမြတ်နိုးဦးရဲ့ မိခင်ကတော့ နာမည်ကြီးမြိတ်စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး … Read more
အစွယ်လိုသူမိဖုရားတဲ့လား…. ကျမတကယ်လိုချင်ခဲ့တာက မင်းဆဒ္ဒန်ရဲ့အချစ်တစ်ခုတည်းရယ်ပါ..
စူဠသုဘဒ္ဒါ မုန်းခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး ပြောရက်ကြတယ်…အစွယ်လိုသူမိဖုရားတဲ့လား….ကျမတကယ်လိုချင်ခဲ့တာက မင်းဆဒ္ဒန်ရဲ့အချစ်တစ်ခုတည်းရယ်ပါ… အင်ကြင်းပန်းမှာ ခါချဉ်လေးကပ်ရုံနဲ့ ကမ္ဘာအဆက်ဆက် သုဘဒ္ဒါမုန်းရက်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါဘူး… ပြိုင်ဘက်နဲ့ ယှဉ်ရင် အချစ်တွေအကုန်အစင် မရခဲ့လို့သုဘဒ္ဒါရင်မှာ နာကျင်ကြေကွဲခဲ့ရတာပါ…. ဒါတွေကို ရှင်နားလည်ရဲ့လား မင်းဆဒ္ဒန်…. ဟိမဝန္တာ တောင်စဉ်ခုနစ်ထပ်မှာကျမဟာ ရှင့်အတွက်ဆို အသက်ပေးဖို့လည်း အဆင်သင့်ဖြစ်ခဲ့ပါရက်နဲ့ ဘဝတစ်ခုလုံးပေးဆပ် ချစ်ခဲ့တာတောင် ရှင်ပြန်ပေးခဲ့တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက ဒုတိယ တဲ့လား….ဟင့်အင်း… ပထမချစ်ခြင်း မဟုတ်ရင် ဒုတိယအဖြည့်ခံတော့ ဘယ်မိန်းမသားကမှ မဖြစ်ချင်ဘူး…. မဖြစ်နိုင်ဘူး မင်းဆဒ္ဒန်… မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး… ဒုတိယ ဆိုတာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး မင်းဆဒ္ဒန်ရယ်…ကျမ ရှင့်ကို စိတ်နာတယ်…. ဟိမဝန္တာ လွမ်းရိပ်မြိုင်မှာ အမုန်းတွေ တစ်သီတစ်တန်းနဲ့ ကျမ ကျဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး…. အပယ်ခံတစ်ယောက်လို နာကျင်မှုမျိုးနဲ့ ကိုယ့်အချစ်ကို အဆိပ်ခတ်ပြီး ယိုင်နဲ့နဲ့နှလုံးသားတစ်စုံကို ဖက်တွယ်ရင်း … Read more
ခတျေသဈဇောတိက သူဌေးကွီး ဦးဇျောဇျော လှုပွနျပွီ အားကမြိပါ၏…သာဓုချေါပါ၏
အသက် ၆၀ နှစ်အထက် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ဟောင်းများနှင့် ဒိုင်လူကြီးဟောင်းများအား ဧရာဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်း မှ ဆန်နှင့်ထောက်ပံ့ငွေ ကျပ်တစ်သိန်းစီ လှူဒါန်း Stay At Home နေထိုင်လျက်ရှိကြသည့် အသက် ၆၀ နှစ်အထက် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ကစားသမားဟောင်းများနှင့် ဒိုင်လူကြီးဟောင်းများ နေထိုင် စားသောက်မှု အဆင်ပြေစေရေး အတွက် တစ်ဦးလျင် 5KG ဆန်တစ်အိတ်စီနှင့် ငွေကျပ် တစ်သိန်းစီအား ဧရာဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်းက ပေးအပ်လှူဒါန်းခြင်းကို ယနေ့မွန်းလွဲ(၁)နာရီက မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။ လှူဒါန်းပွဲသို့ မြန်မာနိုငငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်နှင့် မက်(စ်)မြန်မာ၊ ဧရာဝတီ ဖောင်ဒေးရှင်းတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာနိုငငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် တာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဟောင်းများအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းတိုးအောင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ … Read more
“လနဲ့ခြီပွီး သှေးနဲ့ ခြှေးနဲ့ ရငျးထားရတဲ့ တောငျသူတှရေဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ မွဈထဲမှာ မြောပါသှားပွီ”(ရုပျသံ)
မူဆယျမွို့နယျမှာ ဒီလိုပွောငျးဖူးစိုကျတဲ့ တောငျယာ ဧကပေါငျး သောငျးနဲ့ခြီရှိတယျလို့သိရပါတယျ…ခုပွထားတဲ့ရုပျသံတှဟော မူဆယျမွို့နယျထဲက ပွောငျးဖူးစိုကျတောငျသူတှရေဲ့ အဖွဈအပကျြပါ တရုတျပွညျကို ပွောငျးဖူးတှပေို့ဖို့ ထျောလာဂြီတှရောပေါငျးမြားစှာနဲ့ သှားကွပမေယျ့ နယျစပျဂိတျက အဝငျမခံတော့လို့ ခုလိုတှဖွေဈခဲ့ရတာပါ ဒီပွောငျးဖူးတှဟော အစိုကွျောစား ခကျြစားဖို့ လတျလတျဆတျဆတျ ခူးရောငျးရတာဖွဈပွီး ခုလိုနယျစပျအပိတျခံလိုကျရတဲ့အခါ ပကျြကုနျဖွဈသှားတာပါ လနဲ့ခြီပွီး သှေးနဲ့ခြှေးနဲ့ ရငျးထားရတဲ့ တောငျသူတှရေဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှကေတော့ ပွောငျးဖူးတှနေဲ့အတူ မွဈထဲမှာ မြောပါသှားပါပွီ Source : Sai N Lengjuinfa FB zawgyi code ရုပ်သံကြည့်ရန်(၁) ရုပ်သံကြည့်ရန် (၂) ရုပ်သံကြည့်ရန် (၃) မူဆယ်မြို့နယ်မှာ ဒီလိုပြောင်းဖူးစိုက်တဲ့ တောင်ယာ ဧကပေါင်း သောင်းနဲ့ချီရှိတယ်လို့သိရပါတယ်…ခုပြထားတဲ့ရုပ်သံတွေဟာ မူဆယ်မြို့နယ်ထဲက ပြောင်းဖူးစိုက်တောင်သူတွေရဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ တရုတ်ပြည်ကို ပြောင်းဖူးတွေပို့ဖို့ ထော်လာဂျီတွေရာပေါင်းများစွာနဲ့ သွားကြပေမယ့် … Read more
ဇနီးကိုယ်တိုင် လူတစ်စုနှင့်ပေါင်းပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းသူ ယောက်ျားအား စိတ်ကျန်မာရေးဆေးရုံအပို့လိုက်တဲ့ ခေတ်သစ်လုပ်ကြံမှု . . .
ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို ခေတ်ပေါ်နည်းဖြင့် လုပ်ကြံရန် ကြိုးစားမှု ပြည်သူဘဝ မလုံခြုံတော့ပြီလော ဇနီးဖြစ်သူမှ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခြင်းခံရသည့် ကျန်းမာရေးကောင်းသူ ခင်ပွန်းသည် ကိုကျော်တင့်ဆွေရဲ့ဖြစ်ရပ်… ဇနီးဖြစ်သူမှ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ခြင်းခံရသည့် ကျန်းမာရေးကောင်းသူ ခင်ပွန်းသည် ကိုကျော် တင့်ဆွေရဲ့ဖြစ်ရပ်ကထူးခြားလှပြန်ပါတယ်။ ကိုကျော်တင့်ဆွေ၊ အသက် -၃၅ နှစ်၊ မိဘအမည်-ဦးလှမောင်၊ဒေါ်ခင်စိန်၊ လူမျိုး/ဘာသာ-ဗမာ/ဗုဒ္ဓ၊ အလုပ် အကိုင်-ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်၊ နေရပ်လိပ်စာ -အမှတ်(၃၂၇/ခ)၊ အောင်သိဒ္ဓိလမ်း၊ ကြီးပွားရေးရပ်ကွက်၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။ ကိုကျော်တင့်ဆွေပြောပြတဲ့ သူ့အကြောင်း… ကျွန်တော်သည် အဘ ဦးလှမောင် ၊ အမိ ဒေါ်ခင်စိန် တို့မှ မကွေးမြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။ မွေးချင်း (၁၀)ဦးအနက်မှ နဝမမြောက်သားဖြစ်ပါသည်။ ငယ်စဉ်က သူငယ်တန်းမှ အဌမတန်းအထိ မကွေးမြို့နယ် ရွက်ဟောင်းကန်ကျေးရွာ ကျောင်း၌ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး တက္ကသိုလ် ဝင်တန်းစာမေးပွဲကို … Read more
နာမည်မှာ “သ´´ ပါတဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်း
နာမည်မှာ “သ´´ ပါတဲ့သူတွေ စိတ်ကြီးတယ်….. ဒေါသဖြစ်လာရင် ဘယ်သူကိုမှဘယ်အရာကိုမှ ထည့်မစဉ်းစားဘူးထည့်လဲ မတွက်တတ်ဘူး ဒါပေမယ့်​ ပြောပီး လုပ်ပီးသွားလို့သူမှားနေတဲ့ကိစ္စကိုလဲပြန်တောင်းပန်ဖို့ဝန်မလေးတတ်ကြဘူး စိတ်နာအောင်တော့ လာမလုပ်နဲ့​သေတဲ့အထိ မှတ်ထားတတ်တယ်အငြိုးအတေးလဲ ကြီးတယ် အပေါ်ယံခင်မင်တာ မလိုလားဘူးသူငယ်ချင်း အစစ်ပဲ လိုချင်ကြတယ် ယောင်လို့​တောင်နာမည်မှာ`သ´ပါတဲ့သူကိုအရွဲ့မတိုက်မိစေနဲ့သူများတွေ ရွဲ့တာထက်အဆပေါင်းများစွာ ပြန်ရွဲ့တတ်တယ် သနားအောင်ပြောလာရင်အိတ်ထဲရှိတဲ့ ပိုက်ဆံကိုယ်​ မသုံးရရင် နေပါစေ​ပေးပြစ်တတ်တယ် မပေးချင်ဘူး ကြည့်မရဘူးဆိုရင်အဲ့လူဘာဖြစ်နေပါစေလှည့်ကို မကြည့်တော့ဘူး လိမ်တာ ညာတာ အရမ်းမုန်းတယ်ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းများ အပေါ်မှာ​တော့ ဟာသတွေ ရယ်စရာတွေပြောပြီးစနောက်တတ်ကြတယ် အနေအေးတယ်တခြားသူတွေကိုဆို ပြုံးပြဖို့ မပြောနဲ့မျက်နှာထားက ခပ်တည်တည်နဲ့တေလာကလုံးသူ့လုပ်စာ စားနေကြတဲ့အတိုင်းပဲ ဘာပဲလုပ်လုပ်အများအတွက်ပဲ ကြည့်တတ်တယ်တစ်ကိုယ်ကောင်း မဆန်တတ်ကြဘူး ဒါပေမဲ့ မထင်ရင် မထင်သလိုလည်း​ပြောတတ်တဲ့ အကျင့်ကလည်း ရှိသေး​ပြောရမယ်ဆိုနာမည်မှာ`သ´ပါတဲ့သူတွေဟာမဟုတ်မခံ ပေါင်းရသင်းရခက်ပြီးစိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့လူ့ဂွစာကြီးတွေပေါ့ဗျာ ၊၊ မှန်နေတယ်ဆိုရင် ရှယ်သွားလိုက်ကြနော် credit နာမညျမှာ … Read more
← Previous Page1 … Page179 Page180 Page181 … Page216 Next →